ဥရုဂွေးနိုင်ငံ သမ္မတက Sinovac ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ် ထိုးနှံမှု ခံယူ - Xinhua News Agency
ဥရုဂွေးနိုင်ငံ သမ္မတက Sinovac ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ် ထိုးနှံမှု ခံယူ
မွန်တီဗစ်ဒီအိုမြို့ ၊ မတ် ၃၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဥရုဂွေးနိုင်ငံ သမ္မတ Luis Lacalle Pou သည် COVID-19 ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Sinovac မှ ထုတ်လုပ်သော CoronaVac ကာကွယ်ဆေးဖြင့် မတ် ၂၉ ရက်တွင် ပထမအကြိမ် ထိုးနှံမှု ခံယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဥရုဂွေးနိုင်ငံ၏ မြို့တော်မွန်တီဗစ်ဒီအိုရှိ Maciel ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ပြီးနောက် သမ္မတက ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့် ရှေ့တန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသည့် နည်းပညာ နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့များ၏ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု ၊ ကိုယ်ချင်းစာနာမှု နှင့် စီစဉ်ထားရှိမှုများကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
ဥရုဂွေးနိုင်ငံ သမ္မတက မတ် ၁ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု အစီအစဉ် မတိုင်မီကပင် ၎င်း၏ အသက်အရွယ်အုပ်စု အလှည့်ရောက်ရှိသောအခါတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု ပါဝင် ခံယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု အစီအစဉ်တွင် အသက် ၈၀ နှစ်အထက် နှင့် ၅၀ မှ ၇၀ နှစ်အကြားရှိသူများ ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ထမ်းများ ၊ ပညာရေး ဝန်ထမ်းများ ၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တနင်္လာနေ့မှ စတင်၍ စနေနေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည့် ဝတ်ပြုပွဲတော်ရက်ကာလအတွင်း အဓိက ထိုးနှံ ပေးသွားရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက် နိုင်ငံသားများအားလုံးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် ခွင့်ပြုထားကြောင်း သိရသည်။
ဥရုဂွေးနိုင်ငံသည် COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ တိုးများလာခြင်းနှင့်အတူ ရောဂါ၏ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖိအားဖြစ်သည့် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် (ICU) တွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူရသည့် အရေအတွက်မှာလည်း မြင့်တက်လာကာ အလွန်ခက်ခဲသော အချိန်တစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်နေရကြောင်း သမ္မတက အသိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ဥရုဂွေး နိုင်ငံ၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်လမပြည့်မီကာလအတွင်း နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း နီးပါးဖြစ်သော ပြည်သူ ၅၃၀,၀၀၀ ဦးကျော်ကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ် ၁၃ ရက်မှစ၍ ယခုအထိ ဥရုဂွေးနိုင်ငံ၌ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ ၉၉,၅၈၄ ဦး နှင့် သေဆုံးသူ ၉၂၈ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
MONTEVIDEO, March 29 (Xinhua) — Uruguayan President Luis Lacalle Pou on Monday got his first dose of the CoronaVac vaccine developed by Chinese pharmaceutical firm Sinovac against COVID-19.
Speaking to reporters after getting vaccinated at the Maciel public hospital in Montevideo, Lacalle Pou thanked the “professionalism, humanism and disposition of the technical and medical teams, who are on the frontlines of vaccinating.”
The president had announced before the start of the vaccination campaign which began on March 1 that he would be vaccinated when it was the turn of his age group.
The vaccination campaign targets those aged between 50 to 70 and over 80, and healthcare workers, education workers and members of the security forces, while during the Holy Week that started on Monday and will last until Saturday, all citizens over 18 years old are allowed to get inoculated.
Lacalle Pou acknowledged Uruguay is going througha“difficult” time, with an increase in COVID-19 cases “putting pressure on the last barrier, which are the ICUs (Intensive Care Units).”
Less thanamonth into the immunization drive, Uruguay has vaccinated more than 530,000 people, which is close to 15 percent of its population.
Since March 13, 2020, the South American country has registered 99,584 cases of COVID-19 and 928 deaths from the disease. Enditem
အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမေရိကန်ပြည်သူ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း သုံးပတ်အတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု ရရှိမည်ဟု ဆို